Wararka - Sida loo horumariyo saamiga suuqa caalamiga ah ee baakadaha dhalada cadarka
Waqtigan xaadirka ah, in kasta oo suuqa cadarka guryaha si xawli ah u korayo, laakiin adduunka oo dhan qadarka isticmaalka cadarka ee saamiga ma badna. Si kastaba ha noqotee, Baakadaha Shiinaha ee hadda ku jira baakadaha cadarka ee Shiinaha ayaa ahaa hal ama laba. Marka lagu daro qaar aad u sarreeya - dhammee qalabka raaxada, dhalooyinka cadarka guryaha ee adduunka ayaa hareeyay suuqa intiisa badan, ha ahaato udugga gudaha ama shirkadaha caalamiga ee caanka ku ah barafuunka badankood waxay ka yimaadeen baakadaha dhalada cadarka ee Shiinaha.
Si kastaba ha noqotee, baakadaha dhalada cadarka Shiinaha ee geedi socodka adduunka, si loo hagaajiyo saamiga suuqa.Waxaa jira dhowr meelood oo u baahan in la hagaajiyo:
1. Hal-abuurnimo naqshadeyn ah
Naqshadeynta dhalooyinka cadarka, waa inaan ka bedelnaa nuqulkii hore iyo ku dayashada una nimid naqshadeynta hal-abuurnimada madaxbanaan.Waxaan hagaajinayaa heerka naqshadeynta naqshadeynta.Sidaas uun ayaan ku guuleysan karnaa kalsoonida shirkadaha cadarka ee caanka ku ah suuqa sare.
2. Ku hagaaji tallaabooyinka xaaladaha maxalliga ah
Marka loo eego gobollo kala duwan, naqshadeynta iyo soo saarista dhalooyinka cadarka waa in loo qaabeeyaa loona soo saaraa iyadoo loo eegayo gobollo kala duwan Tusaale ahaan, Bariga Dhexe waxay jeceshahay muuqaalka raaxada leh ee dhalooyinka cadarka, halka gobollada Yurub iyo Ameerika ay jecel yihiin baakadka muuqaalka fudud ee cadarka. dhalooyinka Tani waxay u baahan tahay falanqeyn la taaban karo.
3. Faahfaahinta xirxiraya raaxo
Feejignaanta waa in la siiyaa faahfaahinta baakadaha ee dhalooyinka cadarka Baakadaha dhalada cadarka waxaa ka mid ah sanduuqa waraaqaha, qaybaha buufinta buufinta. Kaliya qayb walba waa mid fiican, faahfaahinta kaamil ahaanta ayaa ah, in ka badan ayaa laga doorbidi karaa suuqa.
Marka la soo koobo, si loo xoojiyo tartanka loogu jiro baakadaha dhalada cadarka ee suuqyada caalamiga ah, waa inaan u hogaansanaano naqshadeynta naqshadeynta, fiiro gaar ah u yeelo faahfaahinta baakadaha isla markaana tixgelin buuxda siino dhadhanka macaamiisha.